May 13, 2021 - Cele Fans
ငွေထုတ်ဖို့ အပင်ပန်းခံ တန်းစီနေရတဲ့ လူတွေအတွက် ငွေထုတ်ဖို့ အဆင်ပြေတဲ့ နည်းလမ်း တခု
May 13, 2021 Cele Fans Comments Off on ငွေထုတ်ဖို့ အပင်ပန်းခံ တန်းစီနေရတဲ့ လူတွေအတွက် ငွေထုတ်ဖို့ အဆင်ပြေတဲ့ နည်းလမ်း တခု
ငွေထုတ်ဖို့ အပင်ပန်းခံ တန်းစီနေရတဲ့ လူတွေအတွက် AYA ATM ကတ်ထဲကငွေ ထုတ်ဖို့အဆင်ပြေတဲ့နည်းလမ်းတခုပြောပြပါမယ် တချို့ဆို ATM ကတ်ထဲကငွေထုတ်ဖို့ကိုမနက်၆နာရီလောက်ထဲကထပြီးသွားတန်းစီရတယ်…. လူတွေအရမ်းများတော့တနေကုန်နီးပါးတန်းစီ…. နေ့ခင်း၃လေးနာရီလောက်မှတရက်စာအတွက်ထုတ်ပေးတဲ့၃သိန်းလေးပဲရတာ ဒါတောင်တခါတလေကိုယ့်အလှည့်ရောက်လို့ATM စက်ရှေ့ရောက်ပြီဆိုမှပိုက်ဆံကုန်သွားပြီဆိုပင်ပန်းလွန်းခဲ့သမျှသေပါလေရောပဲ…. အဲ့လိုလုပ်မဲ့အစားAYA Pay အကောင့်တခုဖွင့်လိုက်ပြီးAYA Pay Agent ( သို့) Max ဆီဆိုင်ကနေပဲငွေထုတ်ခFees နဲနဲလောက်ပေးပြီးထုတ်လိုက်ကြပါ…… တနေကုန်အိပ်ရေးပျက်အပင်ပန်းခံတန်းစီနေမဲ့အစား ပိုက်ဆံ၃သိန်းကိုထုတ်ခ2500 လောက်ပေးလိုက်ရတာကပဲပိုအဆင်ပြေကြမှာပါ….( ခုချိန်မှာတော့agent တွေလဲငွေထုတ်ပေးဖို့အဆင်မပြေလောက်တော့ ကျွန်တော်က တော့Max ဆီဆိုင်ကနေပဲ သွားထုတ်ခဲ့တယ်…) တနေ့ကို၃သိန်းထုတ်ပေးပါတယ်…… […]
ချင်းတိုင်းရင်းသားများ အပြစ်တင်မစောဖို့ ရင်ဖွင့် လာတဲ့ ချင်းရဲဘော်တစ်ဦး
May 13, 2021 Cele Fans Comments Off on ချင်းတိုင်းရင်းသားများ အပြစ်တင်မစောဖို့ ရင်ဖွင့် လာတဲ့ ချင်းရဲဘော်တစ်ဦး
CNF/CNA ဘာလုပ်နေတာလဲ အိပ်နေကြတာလဲလိုပြောတဲ့သူတွေ ချင်းလူတွေ ဖြစ်ပြီ အပြစ်မမြင်ကြပါနဲ့လား။ ချင်းစစ်သားတွေ တစ်ချို့သောနေရာ သေဒတွေမှာ တိုက်ပွဲ ဝင်နေကြတယ်။ တစ်ချိုသော ရဲဘော်တွေ စစ်သင်တန်း တက်နေကြတယ်။ စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာ လွယ်တယ်လို့ထင်မှာတော့မဟုတ်ကျ ဘူးထင်တယ်၊ လူအင်အားရှိမှ လက်နက်အင်အားရှီမှ ငွေအင်အားလဲ လိုသေးတယ်လေ၊ လက်နက်ကိုင်တယ်ဆိုတာ စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာကော ပျော်လို့တိုက်ကြတယ်ထင်နေကြလား။ဘယ်သူက တောတောင်တွေကြားမှာ အနေဆင်းရဲ အစားဆင်းရဲနေချင်ပါမလဲ ။ မြို့ထဲ ရွှာထဲ့မှာ အလုံးနေချင်ကြတာပါ။ မိဘတွေနဲ့မကွဲချင်ကြပါဘူး။ သူတို့တွေ အတွက်လဲ […]
နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ကျဆုံးသွားခဲ့ရင် ဇနီးသည်အတွက် သေတမ်းစာရေးခဲ့တဲ့ ကျော်ထူး
May 13, 2021 Cele Fans Comments Off on နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ကျဆုံးသွားခဲ့ရင် ဇနီးသည်အတွက် သေတမ်းစာရေးခဲ့တဲ့ ကျော်ထူး
ပရိသတ်ကြီးရေအနုပညာလောကမှာဟာသဇာတ်ရုပ်တွေနဲ့ ပရိသ၊တ်တွေကိုအမြဲရယ်မောပျော်ရွှင်စေခဲ့တဲ့ဟာသလူရွှင်တော်ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်ဦးကျော်ထူးကတော့လက်ရှိအခြေအနေတွေမှာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတက်တက်ကြွကြွ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ဦးကျော်ထူးကတော့ဖေဖော်ဝါရီလအစပိုင်းကတည်းကပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့အတူတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ အားဖြည့်ပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်ထူးကတော့ပြည်သူတွေနဲ့အတူ လမ်းပေါ် ထွက်လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြုလုပ်နေပြီးပြေးလွှား ရှောင်ပုန်းရင်းအခွင့်မသာလို့ကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားရင်ဆိုပြီး သေတမ်းစာအဖြစ်ဇနီးဖြစ်သူဆီစာရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကြီးမှာအခန့်မသင့်လို့ကျဆုံးသွားရင် ပရိသတ် တွေကိုအမြဲပြုံးရယ်စေခဲ့တဲ့သူ့ဘဝခရီးရဲ့အစဖြစ်တဲ့ လူရွှင်တော်တောင်ရှည်ဝတ်စုံကို မျိုးဆက်သစ် လူငယ်တွေဆီလက်ဆင့်ကမ်းဖို့မှာတမ်းခြွေစာရေးသားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များပေါ့နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာအခွင့်မသာလို့ ပြေးလွှားပုန်းအောင်းရင်းနဲ့ကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားရင်ပရိတ်သတ်ကို ပျော်ရွှင်စေခဲ့တဲ့ကျနော်ဘဝခရီးအစတောင်ရှည်ကဆိုသလို လူရွှင်တော်တောင်ရှည်ဝတ်စုံလေးကိုမျိုးဆက်သစ်လူငယ်လေး တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ပါအိမ်သူသက်ထားထူးသခင်ရေဆိုပြီးဇနီးဖြစ်သူကိုစာရေးပြောထားတာပါ။ ဦးကျော်ထူးရဲ့ပို့စ်ရဲ့အောက်မှာတော့ပရိသတ်တွေအပြင် အနုပညာရှင်တွေကလည်းအားပေးစကားလေးတွေလည်း ပြောထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ Credit MA ပရိသတ္ႀကီးေရအႏုပညာေလာကမွာဟာသဇာတ္႐ုပ္ေတြနဲ႔ ပရိသ၊တ္ေတြကိုအၿမဲရယ္ေမာေပ်ာ္႐ႊင္ေစခဲ့တဲ့ဟာသလူ႐ႊင္ေတာ္ဇာတ္ပို႔သ႐ုပ္ေဆာင္ဦးေက်ာ္ထူးကေတာ့လက္ရွိအေျခအေနေတြမွာျပည္သူေတြနဲ႔အတူရပ္တည္ေနသူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြကိုတက္တက္ႂကြႂကြ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ဦးေက်ာ္ထူးကေတာ့ေဖေဖာ္ဝါရီလအစပိုင္းကတည္းကျပည္သူေတြအားလုံးနဲ႔အတူတတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေန အားျဖည့္ပါဝင္ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဦးေက်ာ္ထူးကေတာ့ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ လမ္းေပၚ ထြက္လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြကိုျပဳလုပ္ေနၿပီးေျပးလႊား ေရွာင္ပုန္းရင္းအခြင့္မသာလို႔ကြယ္လြန္က်ဆုံးသြားရင္ဆိုၿပီး ေသတမ္းစာအျဖစ္ဇနီးျဖစ္သူဆီစာေရးသားထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲႀကီးမွာအခန႔္မသင့္လို႔က်ဆုံးသြားရင္ ပရိသတ္ ေတြကိုအၿမဲၿပဳံးရယ္ေစခဲ့တဲ့သူ႔ဘဝခရီးရဲ႕အစျဖစ္တဲ့ […]
May 13, 2021 Cele Fans Comments Off on မြန်မာဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ ပျက်သုဉ်းလုနီးဖြစ်နေပြီ
စစ်အာဏာသိမ်းအပြီး ဖြစ်လာတဲ့ ဘဏ်ငွေထုတ်မူပြဿနာပိုဆိုးလာနေကာ၊ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ဒေါ်လာဈေး၊ ရွေဈေးတွေပါ ကမောက်ကမ ဖြစ်လာနေပြီလို့ သုံးသပ်သူတွေ့ဆိုပါတယ်။ စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ ဒေါ်လာ ၆ သန်းရောင်းချပေးလိုက်တာက၊ ဒီ ဘဏ်ကအစ ဈေးကွက်ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာပါလား။ ဘဏ်လုပ်ငန်းသုံးသပ်သူတွေကို ကိုဝင်းမင်းက မေးထားပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ဒီ ဘဏ်ငွေထုတ်မှု ပြဿနာ ပိုဆိုးလာပုံကို လုံခြုံရေးအရ အမည်မဖော်လိုတဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းလေ့လာသူတဦးက “လက်ရှိ ဘဏ်အခြေအနေကတော့ တနေ့ထက်တနေ့ကိုတော့ နည်းနည်းဆိုးလာတဲ့အခြေအနေလို့တော့ ကျနော်တို့ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့။ […]
May 13, 2021 Cele Fans Comments Off on ဆန်တွေ ဝယ်ထားတာ ကြာလာလို့ မည်းလာတာ ပိုးထိုးလာလျှင်
အိမ်တွေမှာ ဆန်တွေ ဝယ်ထားတာ ကြာလာလို့ မည်းလာတာ ပိုးထိုးတာ မဖြစ်ရအောင် အိမ်တွေမှာ ဆန်တွေ ဝယ်ထားတာ ကြာလာရင် ပိုးကောင်တွေ တက်တာ၊ ဆန်တွေ မည်းလာတာမျိုးတွေ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဒီရန်တွေကနေ ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲဆိုတဲ့ အချက်က ၅ ချက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ရိုးရှင်းပြီး လွယ်ကူပါတယ်။ ၁။ ငရုတ်သီးခြောက် ထည့်ထားပါ လေလုံတဲ့ ဘုံးတွေထဲ ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ငရုတ်သီး အနီခြောက် တချို့ကိုပါ ရောပြီး […]
May 13, 2021 Cele Fans Comments Off on ကျနော်ချစ်တဲ့ တပ်မတော်ကြီးကို ပြိုကွဲဖို့ မကြံစည်သင့်ဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ မင်းအုပ်စိုး
သူ႔ရဲ႕ ဆိုရွယ္မီဒီယာ မွာေတာ့ ” ျမန္မာျပည္ေျမပုံ အေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုေထာက္ခံခ်င္ပါသလား ေထာက္ခံလို႔ ရပါတယ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်စ္ခင္ခ်င္ပါသလား ခ်စ္ခင္လို႔ရပါတယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးကိုးကြယ္ခ်င္လြန္းတဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ အ ေမ လို႔ေခၚခ်င္ပါသလား လြတ္လြတ္ လပ္လပ္အားရပါးရႀကီး အေမလို႔ေခၚလို႔ရပါတယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကို ေထာက္ခံခ်င္ပါ သလား ေထာက္ခံလို႔ရပါတယ္ ခ်စ္ခင္ခ်င္ပါသလား ခ်စ္ခင္လို႔ရပါတယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလြန္းတဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ အဘလို႔ ေခၚခ်င္ပါသလား လြတ္ လပ္စြာ […]
May 13, 2021 Cele Fans Comments Off on ကွယ်လွန်သွားတဲ့ အမေ့ကိုယ်စား အမေ့ပုံစံတူအရုပ်နဲ့သာ ဘွဲ့ယူခဲ့ရရှာတဲ့ ကျောင်းသားလေး
ကျောင်းသားတိုင်းကတော့ ဘွဲ့ယူတဲ့ နေ့လေးမှာ မိသားစု စုံလက်စွာနဲ့ ဘွဲ့ယူချင်ကြတာပါနော်။အခု ကျောင်းသားလေးဟာ ဘွဲ့ယူတဲ့ အခါမှာ မိခင် ပူံတူလေးကိုဘဲ ယူခဲ့ရတာပါနော်။ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးPaulo Johnဟာ ဘွဲ့ယူတဲ့နေ့မှဓာတ်ပုံလေး တွေကို ဇူလိုင်လ16 ရက်နေ့က Twitterမှာ တင်လိုက်တဲ့အခါမှာ retweet 4600 ရရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့။Pauloက ဘွဲ့ဝတ်စုံကို ဝတ် ထားပြီးတော့ ဘေးမှာကသူ့အမေကိုယ်စား ပုံစံတူစက္ကူရုပ်ကြီးနဲ့အတူ တွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံပါ။ ဘုရား သခင်ရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ မေမေ့သားအကြီးဆုံး ဘွဲ့ယူနိုင်ခဲ့တာ […]
May 13, 2021 Cele Fans Comments Off on “မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ ရှေးဟောင်းနယ်မြေတစ်ခု ရှိနေတယ်ဆိုတာ သင်သိပြီးပြီလား”
ဘာနည်းပညာ အကူအညီမှမပါပဲ ကျောက်တောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကို လက်နဲ့သာ ထွင်းထုပုံဖော်ထားတဲ့ #ရွှေဘတောင်နှစ်ပေါင်း ၉၀၀ တိုင်အောင် ခမ်းခမ်းနားနား ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ မုံရွာမြို့ရဲ့ #ရွှေဘတောင်ကျောက်စေတီတွေ၊ ကျောက်လှိုင်ဂူတွေ၊ ကျောက်လှေကားတွေ၊ ကျောက်ဆင်ရုပ်တွေနှင့် ကျောက်ပန်ပုတွေနှင့် ခမ်းနားစွာ တည်ရှိနေတဲ့ #ရွှေဘတောင်နောင်တချိန် သွားရောက် လေ့လာ လည်ပတ်ဖို့ နှလုံးသားထဲ တေးမှတ်ထားရမယ့် #ရွှေဘတောင်ရွှေဘတောင်မုံရွာတစ်ဘက်ကမ်းဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဖိုးဝင်းတောင်ဘက်ကို သွားတဲ့လမ်းတွေ ကျော်ပြီးမှ ရောက်တဲ့နေရာလေး တော်တော်သွားရတယ်။အံသြရပါပေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလိုနေရာ […]
May 13, 2021 Cele Fans Comments Off on ဗဟိုဘဏ်နဲ့ ပုဂ္ဂလိဘဏ်တွေမှာ လက်ကျန်ငွေနည်းပြီး ငွေကြေးပြဿနာတက်နေ
ဗဟိုဘဏ်နဲ့ ပုဂ္ဂလိဘဏ်တွေမှာ လက်ကျန်ငွေနည်းပြီး ငွေကြေးပြဿနာတက်နေ စစ်အာဏာသိမ်းမှု နောက်ဆက်တွဲဂယက်အနေနဲ့ ဗဟိုဘဏ်နဲ့ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေမှာ ငွေသွင်းသူနည်းပြီး ထုတ်ယူသူသာ ပိုများလာတာကြောင့်၊ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး ဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့ ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ် ပြဿနာကို အကြီးအကျယ် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ———————— ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ ပုဂၢလိဘဏ္ေတြမွာ လက္က်န္ေငြနည္းၿပီး ေငြေၾကးျပႆနာတက္ေန စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ေနာက္ဆက္တြဲဂယက္အေနနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြမွာ ေငြသြင္းသူနည္းၿပီး ထုတ္ယူသူသာ ပိုမ်ားလာတာေၾကာင့္၊ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ […]
May 13, 2021 Cele Fans Comments Off on သင်မသိသေးတဲ့ မတ်တပ်ရပ်ပြီးရေမသောက်သင့်သည့်အကြောင်းအရင်း
ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက် တစ်နေ့ကို ရေ(၈)ခွက်သောက်တာက ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြဿနာက ရေသောက်တဲ့အခါ ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးနဲ့ သောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတာပါပဲ။ လူတော်တော်များများဟာ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိပ်ပြီး မသိရှိကြသလို သတိလည်း မထားမိတတ်ကြပါဘူး။ သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ရေသောက်တဲ့အခါမှာ မတ်တပ်ရပ်အနေအထားနဲ့ မသောက်သင့်ဘူးဆိုတာကို အံ့အားသင့်စွာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ 💧၁။ အဆစ်ရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်မတ်တပ်ရပ်အနေအထားဖြင့် ရေသောက်တဲ့အလေ့အထဟာ ကြာလာတဲ့အခါမှာ အဆစ်ရောင်တဲ့ ဝေဒနာကို ခံစားလာရနိုင်ပါတယ်။ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ရေသောက်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ အဆစ်အဆက်များဆီသို့ အရည်ဓာတ်စီးဆင်းမှုကို […]